गुगल, फेसबुक चीनमा प्रतिबन्धित
एजेन्सी, ११ जेठ । चीनमा विभिन्न कुरा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र विश्वका सबैभन्दा माथि लग्न चाहन्छ। तर प्रविधि र संचार माध्यमको पहुँचमा सरकारले निकै बन्देज लगाएको छ। प्रतिबन्ध लगाइएका कुरा 1.इन्स्टाग्राम 2.ट्विटर 3.गुगल 4.फेसबुक 5.स्न्यापच्याट 6.विभिन्न वेबसाइट्स 7.विदेशी फिल्म 8.इ बुक र भिडियो 9.क्यासिनो 10.विवादास्पद किताब
काठमाण्डौं, १० जेठ । एप्पलको आइफोन बोक्नु शानको बिषय बन्ने गरेको छ । नेपालमै पनि मध्यम तथा उच्च वर्गका सदस्यहरु एप्पलको आइफोन प्रयोग गर्न औधी रुचाउँछन् । तर यसको मूल्य निकै उच्च छ । आइफोनको मूल्य साबिकको तुलनामा घट्ने संभावना छ कि छैन होला त ? यदि यस्तै सोचिरहनुभएको छ भने अब एप्पलले आफ्नो आइफोनको […]
नेपाल टेलिकमको मोवाइल इन्टरनेट डाटामा अफर
नेपाल टेलिकमले मोवाइल इन्टरनेट डाटामा अफर ल्याएको छ। इन्टरनेसनल टेलिकमेनिकेसन डेको अवसरमा जेठ ४ देखि जेठ १८ गतेसम्म जिएसएम प्रिपेड र सीडिएमए प्रिपेड र पेस्पेड मोवाइलको लागि टेलिकमले अफर ल्याएको हो। टेलिकमले यो सुविधाको लागि ग्राहकले बरबाहेक ९० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने छ। डाटा प्याकेज बेलुका ११ बजे देखि बिहान ५ बजे सम्म अनलिमिटेड […]
तपाइँको फेसबुक कस्ले हेर्दैछ ?
काठमाडौं, ३० बैसाख । रुको जानकारी लिन र तस्विर हेर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अहिले सबैभन्दा सहज माध्यम बनेको छ । मानिसहरु साथी भएपनि नभएपनि एक अर्काका फेसबुकबारे जानकारी लिइरहन्छन् । तर तपाइँले आफ्नो फेसबुक कसले हेरिरहेको छ भन्ने चाल नपाइरहनु भएको हुन सक्छ । गुगल क्रोम एक्सटेन्सनको मद्धतले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल हेर्नेहरुको बारेमा जानकारी दिने […]
प्रविधिको दुनियाँमा दिग्गज कम्पनी ‘एप्पल’ ले विगत १३ वर्षमा पहिलो पटक घाटा ब्यहोरेको छ । मंगलबार जारी गरिएको तथ्यांकअनुसार सो कम्पनीले पछिल्लो त्रैमासिक अवधिमा १३ प्रतिशत घाटा व्यहोरेको हो । आइफोनको बिक्रीमा कम्पनीले गरेको ‘अतिविश्वास’ र चिनियाँ बजार एप्पलको घाटाको मूख्य कारण रहेको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष यसै त्रैमासिकमा एप्पलले ५८ अर्ब डलरको बिक्री […]
तपाई सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाईल किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
काठमाडौं,१५ वैशाख । अहिलेको जमानामा बजारमा हरेक समान सेकेन्ड ह्याण्डको पनि पाईन्छ । तर हरेक सेकेन्ड ह्याण्डको समान राम्रो हुन्छ भन्ने छैन ।त्यसैले यस्तो समान किन्नुभन्दा पहिले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि तपाई सेकेन्ड ह्याण्डको स्मार्टफोन मोबाईल किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि बिचार गर्नुहोस् । सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोनको आजभोली आफ्नै बजार छ। मानिसहरुले महंगा स्मार्टफोन […]
फेसबुकले आफ्नो न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्ने
फेसबुकले आफ्नो न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्ने भएको छ। यो परिवर्तन खासै ठूलो नभए पनि प्रयोगकर्ताको लागि निकै उपयोगी हुने जनाइएको छ। यस परिवर्तनमा लाइक गरिएका पेजबाट लगातार पोस्ट वालमा अाउने छैनन्। साथै कुनै प्रयोगकर्ताले न्यूज फिडबाट कुनै पोस्ट कति पढ्छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान राख्ने जनाइएको छ। प्रयोगकर्ताको इच्छा अनुरुप उनीहरुको न्यूज फिडमा कन्टेन्ट दिइने […]